Dadka helayso in dhibaato inta badan la nasiisay videos. Mararka qaarkood waxaan u qoraan videos ka our telefoonka iyo fiidiyo jihada ah aan joogto ahayn oo badanaa laga helo 90-180 darajo wareejiyo ku ciyaari lahayd kobiyuuteerka. Mararka qaarkood si ay u daawadaan by flipping monitor ee kiiska ee telefoonka gacanta ama bandhigay yar oo kombiyuutarada kiniin ama fiidiyo awoodi laga yaabaa in u. Laakiin marka aynu doonayno inaynu u daawadaan in Desktop Kombiyuutaro, waa dhibaato halis ah. Laakiin waxaan isku shaandheyn karaa video isticmaalaya VLC ka Player, qalab ku anfacaya freeware oo caan ah. Halkan, ayaa lagaga wada hadlay in isku shaandheyn iyo si loo badbaadiyo nasiisay videos in VLC.
Talaabada 1: Burcad VLC ah
Ka hor inta bilaabay ciyaaryahanka VLC ah, waxaad u baahan kartaa in aad kala soo bixi karaa websaytka ay il iyo rakibi waa in aad PC haddii aadan ku rakiban VLC ka hor. Hadda fur VLC ka Player, iyo bar menu ah lagu soo bandhigi doonaa.
Talaabada 2: Helitaanka in Action
Haddaba si tallaabo ay si "Media" menu socday oo guji "Open File ..." in file ah in aad rabto in aad isku shaandheyn ku furo. Waxa kale oo aad ka heli kartaa in this menu adigoo riixaya "Ctrl + O" sida tuuryo keyboard ah.
Ka dib markii furitaanka video ah, waxaad u baahan tahay si ay u tagaan "Tools" oo ay helaan "Saameynta iyo safeeyuhu" ka menu in. Waxa kale oo aad ka heli kartaa toobiye keyboard in submenu this adiga oo riixaya "Ctrl + E".
Talaabada 3: Saameynta iyo safeeyuhu Window
By socda tallaabooyinka kor ku xusan, waxaad ka heli doontaa suuqa kala pop up for "qabsiga iyo Saamaynta" iyo aad u hesho in ay "Video Raadka" Tab sida hoos ku qoran.
Sida tab "Video Raadka", waxaad ka heli doontaa "Joometri" sub-tab iyo waxa ay doortaan in ay hesho doorasho ee qoqobada.
Talaabada 4: Badal Video
Hadda waxaad haysataa in calaamadee sanduuqa for "beddesha" sida shaashadda hoose-muujiyey. Markaas waxaad isku shaandheyn karaa video ah oo ay ku fiiqaya xagal aad dooratay ee "Round" iyo marka aad ku qanacsan tahay wareeg ah, riix badhanka "Close" meesha ugu hooseysa.
Your video haatan ka ciyaari doonaa xagal saxo ama wareeg, laakiin aad u baahan tahay si loo badbaadiyo file this inuu u ciyaaro sixi qalabka kale. Fadlan raac tallaabooyinka hoose ee lagu badbaadinayo video nasiisay.
Sida loo Save the Videos wareejiyo
Talaabada 1: aad rabtid Select
Hadda aad u baahan tahay si ay u tagaan ee "Tools" menu oo heli "rabtid" oo ka hooseysa sub-menu. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad si loo badbaadiyo video aad isku beddeli hore.
Talaabada 2: Helitaanka in Settings interface
Waxbarashadu waxay ku xusan arbushin doonaa daaqad cusub for "interface Settings". Qeybta hoose ee bidix ee suuqa in, calaamadi sanduuqa "All" in ay leeyihiin oo dhan ama buuxa la door aragtida.
Tani waxay ku tusi doonaa qaar ka mid ah goobaha dheeraad ah oo goobaha la door sare.
Talaabada 3: Hel "Filter Video Badalka"
In ka kooban dhanka bidix, toggle hoos si aad u hesho in ay "wax soo saarka Stream" oo ballaariyo si aad u hesho "Sout il". Ka dib markii la ballaariyo "Sout il", waxaad ka heli kartaa "Transcode" oo guji ku yaal.
Ka dib markii ay helayso "Transcode Stream Output" ee xaq, waxay helaan "Video filter" menu oo calaamadee sanduuqa for "Video Badalka Filter". Markaas riix batoonka "Save" si loo badbaadiyo habkan.
Talaabada 4: Video Badbaadinta
Raadi ee "Media" ka menu oo taga si "Beddelaan / Save" in la sii wado kaydsiga video aad isku beddeli hore. Waxa kale oo aad ka tuuryo ah keyboard "Ctrl + R" ka heli kartaa.
Laga soo bilaabo suuqa kala dabamariyay ilaa "Open Media", waxaad u baahan tahay inaad file ah in aad rabto in aad si loogu badalo ama badbaadin daro. Hadda waxay helaan "Beddelaan / Save" dhibic ka hoos menu hoose ama saxaafadeed "Ctrl + O" haddii aanay halkaa laga heli karaa oo guji badhanka.
Talaabada 5: dhamestiro habka badbaadinta
Haddaba folder caga meesha aad rabto in lagu badbaadiyo file ah oo bilow u ah diinta. Marxaladani waxay qaadan kartaa waqti ka mid ah, oo waxay ku xirnaan doontaa video le'eg. Taas ka dib, aad video la dejin doonaa si ay u xagal saxo, oo aad u ciyaari karaa qalab kale.
By socda habka kor ku xusan oo aad isku shaandheyn kartaa videos laakiin waa hab adag oo muddo dheer isku shaandheyn video ah. Si aad uga dhigto mid fudud oo aad u hesho hab sahlan in aad isku shaandheyn videos noqon karaa suurto gal isticmaalaya Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa aad videos isticmaalaya badan oo qalab, oo waxay ku siin kartaa raaxo badan ka badan habka kor ku xusan. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa aalad ugu fiican ee safafka balaadhan oo ah muuqaalada video tafatirka. Ku raaxayso qoqobada aad iyo aad u hesho nolosha video fudud.
> Resource > Video > Sida loo Laablaab Videos in VLC